Toamasina : jiolahy miisa 42 indray tratran’ny polisy tao anatin’ny efatra andro | NewsMada
Toamasina : jiolahy miisa 42 indray tratran’ny polisy tao anatin’ny efatra andro
Tsy mandry andro tsy mandry alina ny polisy ao Toamasina manoloana ny firongatry ny fandriampahalemana miseholany any an-toerana. Fantatra fa miisa 42 ireo jiolahy voasambotry ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria Tanambao Bazarikely tao anatin’ny efatra andro…
Efa nahatratra 42 ny isan’ireo jiolahy saron’ny polisy ao Toamasina tao anatin’ny efatra andro (29 janoary – 1 febroary 2015) araka ny tatitra avy amin’ny lehiben’ny kaomisaria ao Tanambao Bazarikely Toamasina, ny kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly maraina. Ny alin’ny zoma 29 janoary fotsiny, jiolahy miisa 26 indray tratran’ny vela-pandriky ny polisy ka ny iray amin’ireo tratra tamina halatra môtô tao Bazaribe. Voalaza kosa fa mpivoaka alina tsy mitondra kara-panondro sy ady tao amin’ny trano fandihizana tao Morafeno ny 25 amin’izy ireo. Nampodiana avy hatrany ireo olona ireo rehefa notazonina tao amin’ny violon hatramin’ny alahady alina teo.
Jiolahy telo kosa tratra avy nanendaka tao Ambolomadinika. Mbola hita tany amin’izy ireo ny poketram-behivavy niaraka tamin’ny vola tao anatiny, finday ary zava-maranitra. Tratran’ny polisy tamin’io fotoana io koa ny jiolahy raindahiny antsoina hoe Fabrice izay mpamerin-keloka, araka ny tatitra avy amin’ny polisy hatrany. Halatra môtô teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy ao Tanambao fahadimy no nidiran’ity jiolahy ity tao Ambalatavoahangy, kanjo izao niverina nanohy ny asa ratsiny izao indray izy nony tafavoaka ny fonja.
Noraisim-potsiny tao Tanambao fahadimy koa ireo dimy lahy avy nanendaka vehivavy mpivarotena. Afakomaly, nahatratra mianadahy nangalatra vy fer rond miisa 34 tao Ampasimazava ny polisy.
Miisa 17 araka izany ny natolotra ny fampanoavana ka naiditra am-ponja vonjimaika taorian’izay.